Vavaka hahazoana vola karama. ? Handray karama anio!
Vavaka hahazoana vola Amin'ny maha fitaovam-piadiana ara-panahy azontsika ampiasaina isaky ny mila izany isika dia zava-dehibe tokoa satria ny fanampiana ara-panahy mba hananana fifandraisana tsara amin'ireo namana sy fianakaviana hatrany, indrindra rehefa misy olana ara-bola tafiditra amin'izany.
Ny fampindram-bola amin'ny olona dia mitaky ny fahatokisana ary izany no antony mahatonga ny fitarihana ara-panahy handraisana fanapahan-kevitra ara-bola ny tena ilaina, mba hananana antoka fa hahomby ny asa ary tsy hisedra fahasimbana ny fisakaizana.
Ny vavaka dia mety ho lasa fitaovam-piadiana miafina nefa matanjaka indrindra hivoahana amin'ny toe-javatra sarotra na ireo olana izay heverintsika fa sarotra be loatra hialana amin'ny tsy misy olana.
1 Ny vavaka hahazoana vola
2 1) Vavaka mba hahazoana vola nindramina
3 2) Vavaka mba hahazoana karama
4 3) Vavaka tsara mba hanangona vola
4.1 Atao vola tokoa ve io vavaka aloa io?
Ny vavaka hahazoana vola
Amin'ity fehezanteny ity dia mazava ny antony fa tsy ho an'ny mahazo vola fa izany no hanafoanana an-tsitrapo ary tsy mila miditra amin'ny olana lehibe amin'ny olona iray. Izy io dia ampiasaina amin'ny fotoana somary toa tsy mahasosotra ny toe-javatra.
Tsy voafetra ihany izany amin'ny toe-javatra trosa fa raha miandry ny fandoavana ny asantsika isika na zavatra hafa.
Ireo fandoavam-bola ireo izay mijanona ho mpigadra, azontsika atao ny mamoaka azy ireo amin'ny fanaovana vavaka mahery.
1) Vavaka mba hahazoana vola nindramina
Senhor, meu pai, ianao izay mahery daholo, voalohany indrindra, misaotra anao aho noho ireo tso-drano nomenao ahy isan'andro, fiainana peel, peel saúde, volon-tsakafo sy volo;
Manantona ahy ho anao ianao amin'ny filho teu ary manetry tena I Peço fa manahirana ahy ny zava-misy, manampy ahy ianao (hoy izy na tsy vita feno da pessoa) aloao na dinheiro aho fa ny finoana de de boa sy am-pahalalahan-tanana am-pahalalahan-tanana.
Ny fahatakarana lalandava ary ny fahafantarako fa ilaina foana ny manampy an'i Nossos irmãos em situções precárias, mirary anao hamindra ny coração e seu espírito ianao mba hisaintsainanao sy handoao ity dinheiro ity izay mila ilaiko raha manohy fiainana mendrika sy mendrika. afaka manohy manampy ahy semelhantes, assim mesmo raha afaka manaraka ny desígnios.
Tudo isso eu the peço em nome of Deus pai, Deus filho ary Deus Espírito Santo.
Zava-dehibe ny hivavaka an'io vavaka io hany mba hanomezany anao vola am-pinoana.
Ny tombontsoam-barotra matetika dia mifandray amina toe-javatra sarotra.
Isika dia ao anaty fiarahamonina iray izay mitady ny tombontsoany manokana no toa motera indrindra, matetika ny olona mangataka indram-bola mba hisedra loza amin'ireo orinasa izay tsy mandeha tsara ary miafara mitondra trosa sy olana maro kokoa ho an'ny tenany
Amin'ireo toe-javatra izay ilana vola nindramina mba haverina amintsika, dia afaka mitodika amin'ilay fitaovam-piadiana mahery vaika isika izay azo antoka fa hahita ny valiny ao anatin'ny fotoana fohy kokoa noho ny eritreretintsika.
2) Vavaka mba hahazoana karama
Andriamanitra mahery sy be famindram-po, izay nanome tamim-pahamendrehana ny fanamasinana an'i José Gregorio de la Rivera, izay notendren'ny maritiora mialoha ny afovoan'i Golgota ...
Avy eo dia nohamafisin'i Vatican ho mpiambina ny tranoboky ny mpivavaka aminao, mpiambina ny volany, ny firavany sy ny vato soa azony, miaraka amin'ny fanomezana azy ireo handoa antsika ny vola trosantsika. Fantatro ny hatsaram-bola efa nolaninao, dia manontany anao aho ...
(Ataovy ny fangatahanao) Azafady azafady, José Gregorio de la Rivera.
Ampio aho hanatratra ny Tompo izay angatahiko amin'ity vavaka ity ho fanomezam-boninahitra sy voninahitra lehibe kokoa ary ho tombontsoan'ny fanahiko. Azafady, San José Gregorio hampahafantatra ny anaranao sy hanao mpanaraka bebe kokoa ny antonao.
Izay rehetra ataonao tsara ho ahy dia mampanantena aho fa hataoko ho an'ny hafa koa. Hitsidika ny fiangonana fito aho ary hivavaka ireo salamo notondroinao. Tsy maniry olona ratsy fanahy aho, fa manasitrana fotsiny ny trosako.
Amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Ry Masindahy Maria, arovy izahay.
Miaraka amin'io vavaka io mba handoa ahy sy hahasitrana ny vola nindramina dia hotsahanay ny vola nohazona anay na inona na inona toe-javatra rehetra.
Any amin'ny faritra selestialy ny ady lehibe dia miady ary ny faritra ara-bola dia iray amin'ireo olana be indrindra izay an'ny olombelona hatramin'ny nisian'ny filàna ara-batana, ny fifandraisana manokana ary ny toe-javatra sasany izay azo raisina ho sarotra.
3) Vavaka tsara mba hanangona vola
Androany no itoriako ny lanitra ho anao ho anao
Ampio aho amin'ireto ora mandrakizay izay itoriako ity
Tsy mbola azoko izay tadiaviko;
Androany sy na dia eo aza ny fihetsika feno fiantrana ataoko.
Nivadika ny lamosiko ary tsy mety sitrana aho
Ilay vola trosa tamiko.
Noho izany, ry dada any an-danitra, mamonjy anao aho
Ho anao hanafaka ahy amin'ity hadisoana ity aho
Ary ataovy izay nanampy ahy
Mihazona ny teninao sy izaho ankehitriny
Mamaha ny trosa narahinay taloha.
Ianao irery no afaka mampiditra ahy mandresy
Avy amin'ity fihaonana ity, hatramin'ny fifandanjan'ny ny rariny
Miankina amiko izy
Mangataka anao aho handray anjara amin'ny fanahy, ny feon'ny fieritreretana ary ny fitondran-tena
Momba an'io lohahevitra io sy izay, natosiky ny kofehy anao
Naloako ilay vola nindramina fa tsy nanana ahy
Aza misisika mafy momba izany.
Avelako amin'ny sitraponao masina ity fangatahana ity ary manantena aho
Omeo ahy izay angatahiko.
Tsy mora ny mandray andraikitra fanangonana. Tokony ho fantatsika ny filana avy amin'ny mpiara-monina aminay rehefa mitaky ny fandoavana ny fandoavana na ny trosa vola izay efa nekena teo aloha.
Io vavaka mahomby amin'ny fanangonana vola io, ankoatry ny fanampiana antsika hahasoa ny fizotran'ity fizarana ity dia hameno antsika fahendrena hampiasa ny teny mety rehefa misambotra.
Ho fanampin'izany rehetra izany, tadidio fa ny tenin'Andriamanitra dia miantso antsika tsy hanao izay tsy tiantsika atao amintsika, fitsipika io izay fantatra fa ny fitsipika volamena ary tokony hotadidintsika ambonin'ny zava-drehetra ity karazana asa ity. Izany sy ny vavaka hafa rehetra azontsika atao dia mahatonga antsika hahatsapa ho akaiky kokoa ny Tompo ary hameno antsika amin'ny fahatsapana sy ny maha-olombelona rehefa hanao famoriam-bola.
Atao vola tokoa ve io vavaka aloa io?
Izany tokoa vavaka Izy io dia mahery ny zavatra tokony hataonao dia ny mino avy ao am-po satria io no fepetra takiana hatramin'ny niandohan'ny famoronana izao tontolo izao ka mahomby sy mahery ny vavaka Noforonina tamin'ny alalan'ny teny izao rehetra izao ary izany no antony tsy maintsy anaovantsika ny fangatahana avy amin'ny fanahy fa miaraka amin'ny andraikitra be dia be ary mahalala ny zavatra angatahintsika, dia latsaka amin'ny fitiavan-tena izy ireo, ary mieritreritra ny hafa foana fa tsy ny tenantsika na Ny tombotsoantsika manokana.
Raha manao izany isika dia azo antoka fa mahery ny vavaka ataontsika raha tsy mila mandrehitra labozia na manomana tontolo vavaka manokana.
Ampiasao amin'ny fomba feno ny herin'ny vavaka. Noho izany dia mandoa vola anao izy ireo.
Vavaka ho an'ny virjin'i Fatima